ULily Allen uhamba zePics kunye neNgqokelela yeVidiyo yeVidiyo - Iphonografi Yoosaziwayo
ULily Allen uhamba zePics kunye neNgqokelela yeVidiyo yeVidiyo
Ndikubonisa imvumi kunye nomlingisi uLily Allen uhamba ze kwividiyo yeefoto ezingamanyala kunye neefoto, apho abonise khona iitits zakhe ezishushu kwibali le-Instagram elisusiweyo! Usebenzisa iziyobisi, ujongeka njengejunkie yokwenene njengoko sinokubona kwindlela aziphethe ngayo kunye nokwabelana ngomxholo kwi-Instagram nakwi-Snapchat!
ULily Allen yiminyaka engama-34 ubudala yimvumi yesiNgesi kunye nombhali wengoma, okwangumdlali osaziwayo kwezentlalo. Uyaziwa ngokuba yintombi yomdlali weqonga UKeith Allen kunye nomvelisi wefilimu uAlison Owen. Wenza ezinye zokurekhodwa esidlangalaleni eMyspace nakwi-BBC Radio 1 kunye nekhontrakthi neRegal Recordings. Uncumo lwakhe lokuqala, lwafikelela kwinombolo yokuqala kwi-UK Singles Chart ngo-2006.UAllen wonyulwa kwiiMbasa zeGrammy, iiBrit Awards, kunye neeMbasa zoMculo zeMTV. ULily waqala ukusingatha intetho yakhe, uLily Allen kunye nabahlobo. UAllen wayengumhlobo ka-Amy Winehouse, kwaye aba babini baxelwa ngokuqala inkqubo ekhokelele 'kunyaka wabasetyhini' ilebhile yemithombo yeendaba. Oko kwabona amagcisa amabhinqa amahlanu enza umculo wovavanyo kunye nokungoyiki otyunjelwe uMvuzo weMercury. ULily Allen wayetshatile iminyaka esixhenxe kuSam Cooper, kwaye banabantwana ababini.
ULily Allen uhamba ze kwividiyo yamanyala
Amantombazana aphambeneyo ajikeleze yonke indawo, kodwa kufuneka sikhankanye, uLily uneminyaka engama-34 ubudala. Le ayisiyiyo intombazana eselula ethanda ukutsala umdla! ULily Allen wabelane ngevidiyo ye-porn ehamba phambili, apho sinokumbona khona umzimba wakhe ongenasiphelo. U-Lily Allen oshushu udanisa kwaye abonise ii-tits zakhe, kodwa hayi i-pussy. Ndingathanda ngokwenene ukubona ubufazi bakhe, iesile, kunye nezakhono zokuntywila. Ndiyathemba ukuba kungekudala uza kusinika itheyiphu yesondo, mhlawumbi into efanayo UMiley Cyrus wevidiyo engamanyala ngevidiyo !
Iifoto zikaLily Allen unganxibanga
Phantsi ezantsi ungafumana uLily Allen eshushu ehamba ze enganxibanga elunxwemeni, iifoto zepaparazzi zakhe kunye nudes yeupskirt! Kwakhona, sinezakhelo ezininzi ezingenanto ezivela kwividiyo awabelana ngayo ngeakhawunti yabucala ye-Instagram ngempazamo kwaye sayicima emva kwethutyana! Nantso indlela ekubonakala ngayo xa intombi yabazali abadumileyo iqala ukusebenzisa iziyobisi kwaye iba yingqushu njengazo zonke ezinye ii-slut ezaziwayo eHollywood!
ULily Allen ubonakalise ii-boobs zakhe kunye neengono ezinzima kwakhona! Ngoku ubonwa eCapri, enxibe ibikini eprinta isilwanyana. ULily wayebukeka njengamaxesha onke, exulutywa ngamatye kwaye embi. Lo Julayi ubulindwe ixesha elide!
Ulisa Marie Varon
iliza shlesinger unganxibanga
I-celeste bonin ivuza ze
U-taylor okhawulezayo ebonisa ipussy yakhe
selma hayek imifanekiso enganxibanga